Dib-u-warshadaynta IETT 40% ee Biyaha Uu Isticmaalayo | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIETT Dib-u-cusboonaysiinta 40% ee Biyaha ayaa Isticmaasha
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
IETT waxay dib u isticmaashaa 40 boqolkiiba biyaha ay isticmaasho. Waxay kaydinaysaa celcelis dhan 84 mitir cubic oo biyo ah sanadkii.
Maanta, marka la arko saameynta la taaban karo ee kuleylka adduunka, muhiimadda isticmaalka wax ku oolka ah ee biyaha loo adeegsado ayaa sidoo kale kordha. IETT, oo 4 milyan oo reer Istanbul ah u keenta kuwa ay jecel yihiin, ayaa fiiro gaar ah u leh dib u warshadaynta biyaha loo isticmaalay nadiifinta gawaarida.
Iyada oo lagu dhisayo tas-hiilaadka daaweynta jirka iyo kiimikada ee 13 ka mid ah 6 garaashka ay leeyihiin IETT, waxaa suurtogal ah in dib loo warshadeeyo biyaha wasakhda ah.
Kaydinta, Ujeedada illaa 4 SANO EE WUXUU SAMEEYAA Qoyska 543 qof
Kaydinta biyaha ee sannadlaha ah ee geerashyada IETT waa 84 kun 729 mitir cubic. Isticmaalka biyaha maalinlaha ah ee qoys ka kooban afar waa 13 cubic mitir. Si kale haddii loo dhigo, keydinta laga helay garaashka IETT waxay u dhigantaa 4 sano oo isticmaalka biyaha ah ee qoys ka kooban 543 qof.
Dib u warshadaynta biyaha ayaa sidoo kale faa'iidooyin maaliyadeed u leh IETT. Sanadka 2019, Garaashka Anatolian wuxuu badbaadiyey 57 kun iyadoo looga mahadcelinayo soo kabashada biyaha, 29 kun oo Edirnekapı Garage, 24 kun oo Hasanpa ina Garage, 109 kun oo inkitelli Garage iyo 34 kun oo garaashka Kağıthane.
KHARASHKA 337 SANAD TL Hal sano
Badbaadinta ugu muhiimsan waxaa lagu xaqiijiyey Ayazağa Garage. Ayazağa Garage, oo ah halka biyaha roobku ku aruuriyaan xilliyada, waxay dib u isticmaalaan wax ka badan biyaha ay isticmaalaan. Sannadkii hore, 21 kun iyo 154 mitir cubic oo biyo wasakh ah ayaa loo beddelay Ayazağa Garage, taasoo si weyn uga qayb qaadatay badbaadinta biyaha, 84 lirasna waa la kasbaday.
Dadaallada IETT ee lagu yareynayo qashinka biyuhu waxay sidoo kale soo jiiteen dareenka khadadka fadhigiisu yahay Mareykanka ee fadhigiisu yahay National Geographic. Garaashyada IETT waxay ka heleen caymis balaaran dukumiinti "25 litir" ah oo la sameeyay sanadkii hore. https://www.natgeotv.com/tr/belgeseller/natgeo/25-litre
Biyaha loo isticmaalo nadiifinta baabuurta iett dib ayaa loo warshadeeyay
Verusa Holding waxay heshay 40% Aldem Steel
40 ee boqolkiiba ee Madaarka Saddexaad ee la dhammeystiray
Wasiirka Arimaha Bulshada: UM 40 ee dadweynaha wadanka waxay la kulmeen YHT Bakan
40 ee Tamarta Akkaray
Ku dhawaaqida qandaraaska: MERSİN-TAŞKENT KLM: 12 + 435 KU SII DUWAN EE SASKA '
Paris Transforms Saldhigga Gawaarida Gawaarida ee Meelaha Bulshada
Degmada Erzincan waxay u badashaa mid kasta oo ah Moment to Service
50 ayaa laga jaray habka gaadiidka ee IETT ku yaala Eid al Adha
IETT 22 Boqolkiiba 50 ayaa laga jaray Sebtembar
Ruushka 2014 ayaa bilowday dib-u-soo-kabashada ciyaaraha Sochi Winter Olympics (Video)
ETT İkitelli Garage
ETT Edirnekapı Garage
ETT Kağıthane Garage